Umchwephesha weChemicals Umakhi weBhloko
阿斯劳 bha liweyo nandrolone decanoate .
I-Deca Durabolin, ehlala ibizwa ngokuba yi "Deca", ligama lophawu lweNandrolone decanoate (C28H44O3), i-anabolic steroid ephucula ukusebenza ngokwandisa amandla kunye nokuqina, ukunciphisa ukudinwa kwemisipha, kunye nokunyusa ukukhula kwemisipha. Inika inzuzo enkulu ngokuhamba kwexesha kunye neziphumo ebezingalindelekanga ezimbalwa xa zisetyenziswa ngokufanelekileyo. Enkosi kuluhlu olubanzi lweedosi ezisebenzayo, […]
阿斯劳 bha liweyo Testosterone cypionate .
Kwindawo yokwakha umzimba, kukho i-steroid eshushu ethengisa-iTesttosterone Cypionate powder, enceda ekwakheni izihlunu kunye nokomeleza amathambo, asetyenziselwa ukulahleka kwamafutha kunye nokwandisa isondo.Abantu bahlala bethenga iimveliso zeTesttosterone Cypionate kwiivenkile ezikwi-Intanethi. thenga i-steroids umgubo eluhlaza ngenxa yexabiso eliphantsi kwaye hayi iindlela ezinzima zokuvelisa.Namhlanje silapha ukuze sabelane […]